Ukukhulela ingane, igxathu lakhe lokuqala ngqa hhayi kuphela ukunikeza injabulo ongenakulibaleka. abazali Ingabe abe ukukhathazeka entsha - indlela yokwenza ukuhamba ukhululekile futhi ingane futhi wena. Kuyaphawuleka isandla kulesi izinqwaba ingane. Kuyini futhi kanjani ukukhetha ke?
Phakathi gxuma elibukhali ukuthandwa izitilobho, ERGO, nojosaka kanye nezinye perenosok efanayo omama abaningi akhononda kusimo eyodwa kuphela. Kunzima kakhulu njalo uthole wafaka umntwana emuva bezihambela. Futhi uma unina isebenzisa ngendwayimane, enza emgwaqweni emazombezombe, ngakho ngisho nokuthenga ezandleni, kubonakala kungenakwenzeka.
Khona-ke into enkundleni futhi sife entsha - zinqwaba. Kuyinto ibhande ububanzi, ohlangothini okuyinto isihlalo ukhululekile for umntwana. Kuhlanganiswa ekhethekile ukuphepha amabhande, anikeza inkululeko ephelele ezandleni umzali.
Ukuze ingane esifanelana izinqwaba?
Ukuze anqume ku ukuthengwa "Ezokuthutha", umuntu kufanele aqale acabangele emihle nemibi yokufuna. Izinqwaba ngomntwana nje idinga uma:
- ingane othanda ukugijima, kodwa ngezinye izikhathi uthola ezandleni zakhe;
- Abazali ngokuvamile zihamba nengane olude nge eziningi Ukufakelwa;
- Abazali ngokuvamile ukwenza izizinda eside.
Sula inzuzo phezu indwayimane futhi ubhaka - kulula ukuyisebenzisa. Inzuzo phezu stroller okulula hipsitom ukuhamba emhlabeni zezitolo, ukuhamba on izithuthi zomphakathi.
Uma leyo ngane izokwazi ngenkuthalo ke, isimiso, akunandaba, yini okufanele uthanda. Kodwa lapho ingane - ongumcwaningi othanda ukugijima, abaziphethe Indoda ehamba ngesihlalo sabakhubazekile akwenzi mqondo. Umama kuyodingeka lingadabuki phakathi ukuthutha futhi washesha ngoba ukuzidela ingane. Futhi lokhu ingane isihlilingi ungakhululekile kakhulu, ngoba imilenze usukhathele ngezikhathi ezithile, futhi njalo ngemva kwemizuzu engu 10-20, umama uzodinga sokuphumula / bandaging Indwangu isihlilingi.
Indlela ukukhetha izinqwaba?
Okokuqala, kufanele sithole uhlobo hipsita.
backless zinqwaba. Limelela lonke lelo bhande. Umama kufanele ubambe umntwana ngesandla.
Izinqwaba ngoba ingane emuva. Ivumela ingane ukuba bazizwa kancane ngokunethezeka, kodwa qhubeka unina wayethatha babe kunjalo.
Izinqwaba nge emotweni. Lapha-ke sizokwazi ukubophela ingane futhi asikho isidingo sokuthi bakhathazeke ngokuphepha yayo.
Umbandela ezilandelayo - ezibonakalayo. Ngokuyinhloko abakhiqizi zisebenzisa jini, ukotini noma i-polyester. Kusukela jeans ne-polyester zenziwa izinqwaba Pognae. Le mikhiqizo abhekwa omunye eliphezulu kakhulu.
Futhi ekugcineni intengo. Lapha, wonke umuntu ekhetha lokho kwamukelekile.
Ngingakusebenzisa kanjani izinqwaba?
Lapho emuva womntwana baqina futhi bangahlala, abazali kalula ukuthola obukhulu. Ngo ukusebenza hipsita nhlobo nobunzima.
Ziyisivikelo umane abethela ngesikhathi umzali okhalweni. Isihlalo zingafakwa njengoba ufisa - kusukela ohlangothini, phambi noma labaqaphi elingemuva. Ingane futhi kungenziwa itshalwe njengoba emuva kuya umzali umuntu. Futhi ngokuphelele ungakhathazeki ngoba induduzo ingane. Kuyoba ngcono ngisho kunangesikhathi umama kugcina izandla zakhe. Elilinganiswayo ukusebenza isikhathi - kusukela ezinyangeni ezingu-6 kuya eminyakeni emi-2.
Siphakamisa ukuze yazi nge amanani ngokwesilinganiso phezu Russian emakethe hipsity Korean futhi ukukhiqiza yasekhaya.
Emuva nge ezizibeni zombili
ukuphumula obuhle 2 ezizibeni
ERGO ubhaka + izinqwaba
The wayibhinca c / o + ihlombe elilodwa ukuphumula 2 ezizibeni
Ngenani wokubuyekezwa okuvumelekile kuholele izinqwaba Pognae ( "Pone"). Le brand has palette okubanzi, linezincazelo ocebile 12, isebenzisa high quality materials womshini imikhiqizo. Ngaphezu kwalokho, kuyinto Ukuthwala kuphela, kungaba ukumelana kufika ku 20 kg. Okunye brand ukuvumela ukuba baphathe ingane kuze kufike 13 kg.
Pone ukuncoma ukuthatha izingane abangakwazi kakhulu "manual" kanye izingane esindayo. Lezi hipsity ube isilinganiso kakhulu induduzo, futhi ngenxa yalokho, ekahle eside egqoke. Futhi, i-brand ukhiqiza esezingeni zinqwaba. Izibuyekezo zisikisela ukuthi "Pone" ukusebenza isikhathi eside.
Uma bephethe kwakudingeka isikhathi esifushane. Ngokwesibonelo, olwandle, ukuba mobile nengane yakho futhi ngomoya ophansi iya ku uhambo, khona-ke angasebenzisa noma izinqwaba. Kodwa kungcono ukuthenga isethi ephelele - nge emotweni. Lokhu kuzokwenza ukusebenzisa izandla, futhi ingane kungathatha ngisho isihlwathi uma kunesidingo.
Hipsitov umnikazi we inothi ukuthi sebeyekile lingamlimazanga emuva, okuyinto akumangalisi, ngoba ethwele kunomthelela siyibonakalise ngokufanele yomgogodla futhi ihambisa umthwalo.
Uma wanquma ukuthenga izinqwaba, ukubuyekezwa kule badlala indima ebalulekile. Bazokutshela ukubona amaphutha ezikhiqiza abathengi abavamile.
Njenganoma yimuphi umkhiqizo, lezi perenosok Ubuye nemibi.
Ukubukeka. Abaningi bakholelwa ukuthi izinqwaba ubukeka unpresentable ingane. Futhi yona ukubonakala abazali. Kulokhu, umbuzo uwukuthi, kubaluleke kangakanani kuwe ukududuza.
Izindleko a izinqwaba ezinhle. Intengo umkhiqizo izinga siphakeme ngokwanele.
Security. Ukuthwala eshibhile kungase kudingeke ongaphakeme ukusebenza ukuphepha, isibonelo, ukhiphe ngenkathi ushayela. Ngakho musa skimp.
Usayizi. Izinqwaba kuthatha eningi isikhala ipotimende lakho futhi ubhaka.
Ethwele isiza ukugcina emuva zakho ziqonde. Emgogodleni akuyona engonxantathu njengoba uma ethwele ingane kwi hip yakhe.
isikhwama Special isitoreji kuyasiza ngokuphephile izinqwaba emgwaqweni uma hhayi ezidingekayo.
Kulula ukusebenzisa. Kulula kakhulu ukuba agqoke, akukho nobunzima ehlezi ingane.
Ingane akenqabi ezihlalweni izinqwaba njengoba kwenzeka izitilobho futhi rucksacks. Lokhu kungenxa yokuthi isimo "esandleni" akahlukile umuntu enikeza obukhulu.
Ukuhamba nengane udlubulunda, kuba lula kakhulu futhi kujabulise kakhudlwana.
Ingane ngeke kube lula ukuhamba uzungeze izithuthi zomphakathi, ukuba bame emigqeni, njll
Into ebaluleke kakhulu - sinake umthamo esithwele. Kungenjalo-ke kungenzeka ukuthi wena uzokwazi ukusebenzisa ukuthengwa ngesikhashana esifushane kakhulu. Futhi nje, kungaba ukuthi kuyingozi kanjani ukuba ingane esinda kakhulu izinqwaba, okuyinto it is hhayi yakhelwe.
Contracture - Iyini? Contracture kwemisipha: uphethwe, ukuphathwa
Imithetho engu-12 yokuziphatha e-Facebook
Ungasusa kanjani usawoti kusuka ezicathulweni ze-suede? Izindlela zokulungisa inkinga